Madheshvani : The voice of Madhesh - खोक्रो राष्ट्रवादीहरुले हावादारी कुरा गरे : मुख्यमन्त्री राउत
खोक्रो राष्ट्रवादीहरुले हावादारी कुरा गरे : मुख्यमन्त्री राउत
काठमाडौं, १४ मंसिर । नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले खोक्रो राष्ट्रवादीहरुले हावादारी कुरा गरेको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स नेपाल डटकमसँगको अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो कुरा बताएका हुन् । उनले यदि नेपाल र भारतको सीमामा विवाद छ भने दुवै पक्षका सरकारले कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘यहाँ के को सीमा समस्या छ नेपाल– भारतबीचमा । कहाँ के भएको मैले त्यस्तो देखेको छैन ।’ उनले भने, ‘मैले देखेकै छैन । न त्यसको अध्ययन गरेको छ । यसरी रेडियोबाट झुटो प्रचार गरेर हुन्छ ? तपाईं हामीले देखेका छौं ? कहाँनेर सीमा मिचिएको छ भनेर ।’
सीमा मिचिएको विषयमा त भारत सरकार र नेपाल सरकारका सम्बन्धित व्यक्तिहरु बसेर कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।‘ सत्य के हो ? पत्ता लगाउनुपर्छ । तपाई हामीलाई जानकारी नै छैन । त्यसै जथाभावी भनेर हुन्छ ?’